Kardemir laga bilaabo Birta Gudaha illaa Baabuur guriyeedka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia78 KarabukGaadiidka guriga ka soo jeeda qashinka gudaha Kardemir
26 / 05 / 2019 78 Karabuk, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, baabuurta, TURKEY
baabuurka gudaha ee baabuurka gudaha
Wasiirka Warshadaha iyo Isgaadhsiinta Mustafa Varank ayaa ku dhawaaqay in dib-u-habaynta baabuurta gudaha ay diyaar u noqon doonto dhamaadka sanadkaan iyo in 2022 ay qorsheyneyso in ay waddo gudaha baabuurta wadata. Wasiirka sheegaya in Turkey sii shaqada koox si wadajir ah u ganay isugu yimid in ay soo saaraan gaari qoyska Varank, ayaa sheegay in mashruuca u horseedi doono isbeddel ah ee qaybaha oo dhan. Mid ka mid ah isbeddeladaas, shirkadeena waxay xoojisay waxqabadyada R & D si loo soo saaro tayada birta ee looga baahan yahay qaybta baabuurta.
Maareeyaha Guud ee KARDEMİR Hüseyin Soykan ayaa sheegay in arrimaha soo socda uu qiimeynayo arrinta;
Shirkadda Sida la og yahay, shirkaddayadu waxay bixisaa tayada biraha ee qaybaha kala duwan adigoo u jeestay alaab qiimo sare ah oo wax soo saar leh. Waxaan soo saarnaa noocyo kala duwan oo birta ah oo loogu talagalay warshadaha wax soo saarka mashiinka. Intaa waxaa dheer, waxaanu samaynay koox shaqo oo ka tirsan shirkadda si loo soo saaro tayada birta ee looga baahan yahay dhinaca warshadaha difaaca. Waxaan wadahadal la leenahay ururo badan oo ka tirsan qaybta, waxaanan rabnaa in aan gacan ka geysto sii kordhinta qaybta gudaha ee goobtan adigoo soo saaraya biraha warshadeena difaaca.
100 ee Jamhuuriyaddeena. Mid ka mid ah bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee sanadka waa wax soo saarka baabuurta ee gudaha. Sanadihii la soo dhaafay, warshadaha baabuurta ayaa noqday qaybta ugu balaadhan ee dhoofinta dalkeenna. Waa ujeedo istiraatiijiyadeed oo naga dhexeysa oo aan ku xirno Jamhuuriyadda iyo da'da shirkadkaba leh warshadaha baabuurta iyo noqoshada alaab wanaagsan. Sidaa daraadeed, waxaanu samaynay koox shaqo oo ka dhexjira warshadaha baabuurta sida warshadaha difaaca. Hay'adeena R & D waxay la shaqeyneysaa kaabayaasha jira iyo badeecadaha wax soo saarka, kuwaas oo badeecooyinka aan u fidin karno ganacsiga baabuurta iyo waxa laga qaban karo Kardemir si loo soo saaro alaabta birta ee loo isticmaalo mashaariicda hadda iyo kuwa mustaqbalka ee baabuurta.
Waqtigan xaadirka ah, fasalada dhirta dhexdhexaadka ah ee sare iyo heerarka sarre ee loogu talagalay foornada iyo qaabka qabowga ayaa la siiyaa shirkadeena baabuurta iibiya ee ah qaababka ulaha iyo xirmooyinka loo isticmaalo qaybaha kala duwan ee wareejinta iyo qaybaha wax soo saarida. Horumarka badeecadeena wuxuu u shaqeeyaa jajabyada ku habboon soo saarida boron iyo chrome oo lagu daro dhejiyeyaasha lagu daro wada shaqaynta shirkadaha hormoodka ah ee qaybta. Qaybta tayada-sare ee tayada-sare leh ee loo isticmaalo soo saarida qaybaha gawaadhida ee baabuurta, hawlaha horumarinta wax soo saarka waxaa lagu fuliyaa iyadoo lala kaashanayo soo saaraha caalamiga ah ee dalkeenna. Waqtiga soo socda, fasalada sare ee silica ee soodhaha leh ee ku habboon wax soo saarka guga oo sidoo kale waxaa loo soo bandhigi doonaa warshadaha baabuurta ee qaabka jilicsan.
Wasiirka Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada ayaa ku dhawaaqay in gaariga degaanka uu ku socdo jidadka 2022, in hawlaha R & D ay sii wadi doonaan sii kordhinta iyo in mashruuca uu yahay mashruuc isbedelaya dhammaan qaybaha. Mid ka mid ah isbeddeladan ayaa ka dhacaya shirkadeena iyo sida ugu dhaqsaha badan ee warshadeena birta iyo birta ee dalka oo dhan, waxaan jeclaan lahayn inaan kordhinno waxtarka aan u leenahay shaqooyinka maxalliga ah ee ku yaala goob kasta iyo sidoo kale wadooyinka tareenada iyo tareenada.
Booqo Kardemir laga bilaabo Dervishes ee Warshadaha Soomaliya
Laba go'aan oo maalgashi oo cusub oo ku saabsan waxtarka tamarta ee Kardemir
Tayada Kardemir ayaa loo oggolaaday adduunka
Ostim OSB iyo ARUS waxay booqdeen Kardemir
Duqa Duqa Magaalada Yılmaz sida Talibiz u Qaabilsan Gawaarida Degaanka
Samsun ayaa sidoo kale dalbaday baabuur gudaha ah
TCDD 7. Agaasime-goboleedka Adem Caddri booqashada Duqa Magaalada Bozkurt
Gawaarida gawaadhida ee baabuurta
Dhuxul gudaha ah